ကျွန်တော် နှင့် I2wan အပိုင်း-(၂ ) ( Henry Aung ) — Steemit
ကျွန်တော် နှင့် I2wan အပိုင်း-(၂ ) ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Myanmay Steemit Community မှာ ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန်ရှေ့ဆက်လျက်ရှိပါသည်။ စည်းကမ်းလိုက်နာ၍ promotion ကို ပုံမှန် ရယူနေသူများရှိသလို ပြသနာရှာသူများ ၊ မိမိက vote လျင် ၁၀၀% ဖြင့် vote ပေးရပြီး မိမိ ကို ပြန် vote လျင် ၀% ဖြစ် vote ပေးသူများ၊ ရရှိလာသော SBD များကို Power စုရန် အသာထား ရှိပြီးသော Steem Power များကို ပင်လျင် Power down ၍ ထုတ်ရောင်းစားနေသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။
ဤတွင် ကြုံ၍ အနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါသည်။ MSC post promotion ပေးရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာ လူငယ်မောင်မယ်တို့ ၏ Steemit အကောင့် များ Steem Power များလာကြစေရန် နှင့် ဤသို့ Steem Power များလာပါမှ နှောင်တွင် အခြားလူငယ် မောင်မယ်တို့ကို လက်တွဲ ခေါ်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံခြား သားတို့ ထံမှ အောက်ကျ နောက်ကျခံ၍ အကူအညီတောင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
MSC members များမှ ဤကဲ့သို့ 1$ ဖိုး Power Up 5$ ဖိုးလောက် ထုတ်ရောင်း စားနေလျင် ကျွန်တော်တို့ အိမ်မက်အား မည်သို့ အကောင်အထည် ဖေါ်ရမည်ကို ကျွန်တော် နားမလည်ပါ။ ထို့ အတူ MSC admin များမှ မိမိတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် အချိန်ပေး၍ Promotion ပေးနေရသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ပါ။ ရည် ရွယ်ချက်မရှိသူ များ ပိုက်ဆံ ထုတ်စားနိုင်ဖို့ MSC admin များက အပင်ပန်းခံ ပေး နေရသည်ဆိုလျင် ဤ promotion ကို ဖျက်ပြစ်ရန်သာရှိပါတော့သည်။
လွန်ခဲ့ သော ရက်အနည်းငယ်ခန့်က အင်းတကော်မှ တက်ကြွသူ လူငယ် အဖွဲ့တခု မှ MSC သို့ ဆက်သွယ်လာပါသည်။ သူတို့ လူငယ်များ MSC စည်းကမ်းများ လိုက်နာ၍ SP 1000 ရသည်အထိ ရသမျှ SBD များကို ထုတ်ယူ ရောင်းချ ခြင်း မရှိပဲ SP 1000 ရသည် အထိ စု ဆောင်းပါမည် ၊ သူတို့ အား promotion စဉ်းစားပေးပါမည့် အကြောင်း MSC admin များထံသို့ ဆက်သွယ်လာပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ထိုကဲ့သို့ တက်တက်ကြွကြွနှင့် အာမခံ နိုင်သော လူငယ် မောင်မယ်များကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ရရှိလာသော SBD များကို ထုတ်ယူ သုံးစွဲ အီးလေးဆွဲ Steem Power စု သူများထက် ၊ ရသမျှအားလုံး SP စုပါမည်ဆိုသူများကို ပို၍ အကူအညီပေးလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် MSC admin များနှင့် တိုင်ပင်၍ လက်ရှိ promotion စည်းကမ်းကို ပြင်သင့်လျင် ပြင်ရပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ power down ၍ ရှိနေသော Steem power ကိုပင် ရောင်းစားနေကြသူများ MSC ၏ promotion ကို နောက်ထပ် မမျှော်လင့် တော့ပါရန် ပြောကြားလိုပါသည်။
ဤသည်မှာ လက်ရှိ Myanmar Steemit Community တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြသနာ များမှ အချို့ကို ဖေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ MSC members များ အနေဖြင့်လည်း အနည်းငယ် တွေးတော ကြည့်စေချင်ပါသည်။ ရေရှည် တွင် မိမိတို့ အားကူညီသူ မရှိတော့လျင် မည်သို့ စခန်းသွားကြမည်နည်း။ ကိစ္စမရှိပါ ငါတယောက်တည်းမဟုတ် အားလုံး မရတာ ဘားမှ မဖြစ်ဘူး ဟု ထင်ပါသလား? သူများရနေ၍ မိမိ မရသောအခါ အလွန်ခံရခက် ကြောင်း ကြိုပြောထားပါရစေ။
ဤတွင် ကြုံ၍ I2wan နှင့် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ပါတ်သက်သော စကားစမြည်းကို အနည်းငယ် ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ပါတ်သက်၍ I2wan မှာ အတော်လေး တီးမိခေါက်မိဟန်ရှိပါသည်။ သူ့အနေဖြင့် Daewoo နှင့်ပါတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်တွင် လအတန်ကြာမြန်မာလူမျိုးများကို သင်တန်းပေးခဲ့သူ ဖြစ်ရာ မြန်မာတို့ အကြောင်းသိနေသည်မှာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။
ဤ မြန်မာလူမျိုး အကြောင်း စကားစမြည်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရေး နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျ ခံနေရသော အကြောင်း များ ပြောရင်ဖြင့် မြန်မာတို့ အကြောင်း ရောက်သွားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် I2wan နှင့် ဆွေးနွေခဲ့သော နိုင်ငံရေးအကြောင်းများကို ချန်လှပ်ခဲ့၍ မြန်မာလူမျိုးများအကြောင်း သူ၏ ထင်မြင်ချက်သဘောထားများကို ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြသော I2wan ၏ မြန်မာလူမျိုးတို့ အပေါ် မြင်သော အမြင်မှာ သူ့ အမြင်သာဖြစ်၍ အမှားတစုံတရာ ပါသွားလျင် ဖေါ်ပြသူ ကျွန်တော့ တာဝန် သာဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် တင်ပြလိုပါသည်။ သူပြောသည့် အတိုင်းပြန်ပြောပြပါမည်။ သူ့အမြင်တွင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟူသော အလွန်ကောင်းမွန်၍ သိမ်မွေ့သော ဘာသာတရားတခုက မသင်ပြထားလျင် မြန်မာလူမျိုးတို့မှာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် လောဘအကြီးဆုံး ၊ ကိုယ်ကျိုးသာကြည့် တတ်၍ အများအတွက်လုံးဝ မစဉ်းစားပေးတတ်သော ၊ ထိုအပြင် အလွန်မှ ဝန်တိုတတ်သော လူမျိုးများ ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါသည်။
ထို့အပြင် တစိမ်းနှင့်တွေ့လျင် ဖေါ်ရွေသလောက် မိမိတို့ အချင်းချင်းတွင် အန်မတန်မှ ဝန်တိုသူများဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြပါသည်။ အစပထမတွင် ကျွန်တော်လည်း ပြန်လည်ချေပရန် စဉ်းစားမိသော်လည်း သူပြောပြသော ဥပမေယျ များမှာ ငြင်းမရနိုင်အောင်မှန်နေ၍ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ဝန်ခံယုံမှ တပါး အခြားမရှိပါ။ သူ့အနေဖြင့် ကျွန်တော့အားမေးခွန်းတခုမေးပါသည်။
ဒေါလာ ၅၀၀ ခန့်ပါသော ပိုက်ဆံအိတ် ၁၀ အိတ်ခန့် ကို ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာကတ် တခုထည့်၍ မြန်မာပြည်ရှိ လမ်းမပေါ်တွင် ချ ထားလျင် ပိုက်ဆံအိတ် ဘယ်နှအိတ် ပြန်ရနိုင်ပါသနည်းဟု မေးပါသည်။ ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်ထဲရှိသည့် အတိုင်း အများဆုံး တအိတ်ခန့်သာ ပြန်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်ဖြေပါသည်။အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့ ဖြေရကြောင်းပြန်မေးသောအခါ ကျွန်တော်ကလည်း မြန်မာပြည်သားတို့၏ စာရိတ္တကို သိ၍ ဖြေရပါသည်ဟု ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ဖြေပါသည်။
သူကလည်း မြန်မာပြည်တွင် စာရိတ္တကောင်းသူ မရှိဘူးလားဟု မေးရာ ကျွန်တော်ကလည်း ရှိပါသည် လူနည်းစုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်ဖြေပါသည်။ ဤတွင် သူ ပြန်ပြောပြသော မှတ်ချက်မှာ အလွန်မှတ်သားစရာကောင်းပါသည်။ တိုးတက်ပြီး သော နိုင်ငံ ၊ ဂျပန် ၊ ကိုးရီးယား နှင့် အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများတွင်လည်း စာရိတ္တပျက်ပြား နေသူများ ရှိပါသည်။ သို့ သော် စာရိတ္တကောင်းသူ လူအများစု ဖြစ်၍ လူနည်းစု ဖြစ်သော စာရိတ္တမကောင်းသူတို့ နေရာမရနိုင် ခေါင်းမထောင်နိုင်ကြပါ။ မြန်မာပြည်တွင် စာရိတ္တပျက်ပြားသူ တို့ အားကြီးသောကြောင့် စာရိတ္တကောင်းသူတို့ နေရာမရနိုင်ကြောင်းကို ရှင်းပြပါသည်။
ထို့အပြင် သူနောက်ထပ် ပေးသော မှတ်ချက်မှာ စာရိတ္တပျက်စီးရာတွင် အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သော အခြားသူငှာ များ၏ ဂရုဏာကို လိမ်လည် ရယူ ခြင်းနှင့် ထို ဂရုဏာများမှ အမြတ်ထုတ် ခြင်း အကြောင်းကို ရှင်းပြပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ထိုအဆိုးဝါးဆုံးသော စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများကို အဆုံးစွန် အထိ တွေ့ရကြောင်း သူပြောပြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်၍ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းမှ မုန်တိုင်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူ များကို ဂရုဏာသက်၍ ကူညီ ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့ရာတွင်ပင် ထို အလကားကူညီသော ပစ္စည်း များ ၏ ရာခိုင်နှုန်း မည်မျှ လောက်မှ မရလျင် ပစ္စည်း များ ကို သွင်းခွင့် မပြု နိုင်ဟူသော လူများ မြန်မာပြည် တွင် ရှိကြောင်း သူပြောပြပါသည်။
မိမိတို့ လူများ ဒုက္ခ ရောက်၍ စားစရာမရှိ ၊ သောက်စရာ မရှိ ဖြစ်နေချိ်န်တွင် ပြင် သူတပါး၏ ဂရုဏာကို ဖြတ်စား ဝံ့သော သူများ ရှိနေသော တိုင်းပြည် စုတ်ပြတ်သတ်နေခြင်းမှာ အံ့သြစရာမရှိပါဟုလည်း ထပ်မံ ရှင်းပြပါသည်။ ဤသည်မှာ I2wan မြန်မာတို့ အပေါ်မြင်သော အမြင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် လည်း သူ့ကို ပြန်ရှင်း ပြစရာ စကားလုံး များ ရှာမတွေ့ပါ။ သူပြော ချင်သည်မှာ အားလုံးသော မြန်မာများ ထိုကဲ့သို့ စာရိတ္တပျက်ယွင်း နေသည်ဟု မဆိုလို သော်လည်း အများစုမှာ ထိုအတိုင်း ဖြစ် နေကြကြောင်းလည်း ရှင်းပြပါသည်။
ကျွန်တော်ကလည်း ဤကဲ့သို့ ယိုယွင်းနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအား မည်သို့ တည့် မှတ် နိုင် သနည်း မေးသောအခါ သူပြန်ဖြေသည်မှာ ထိုအရာများကို ပြန်လည် တည့်မှတ်ရန်မှာ ပညာရေး ဖြစ်ပါသည် ဟု ပြန်ဖြေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သင်ကြားခဲ့ရသော ပညာရေးတွင် အဆင့်ဆင့် ခွဲခြာမ်းစိတ်ဖြာစေတတ်သော အမြင် တနည်းအားဖြင့် အတတ်ပညာ ၊ ဤအရာသည် ကောင်း၏ လုပ်သင့် ၏ ဆိုး၏ မလုပ်သင့် ဟူသော ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ခြင်း မလုပ်တတ်ရုံမက လောဘနှင့် မိမိ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ကြည့် ပြီး ဤသို့ ပြုလုပ်လိုက်လျင် အခြားသူ ဘာဖြစ်သွား မလဲ နည်း နည်း မှ ပင် ထည့် မစဉ်စားတတ်ခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ကို သင်ကြားပေးလိုက်သော အခြေခံပညာ ၏ အားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။
ဤတွင်ကြုံ၍ ဆရာဦးအောင်သင်းရှင်းပြသော ပညာ ၏ သဘောတရာကို အနည်းငယ်ထည့်သွင်း ရှင်းပြလိုပါသည်။ ဆရာဦးအောင်သင်မှ သင်္ဃသူ့ သမီး ကျောက်စာတွင်ပါသော " ပညာ ရှိသော ၊ အကြောင်း ကို သိ သော " ဟူ သော စာပိုဒ်လေး မှ " အကြောင်းကို သိခြင်း "ဆိုသည်ကို ရှင်း ပြပါသည်။ စာဖတ်သူတို့ အားလုံးလည်း သိကြမည်ဖြစ်၍ အကျယ်မချဲ့တော့ပါ။ အကျိုးတရား အားလုံးတွင် အကြောင်း တရားရှိ၍ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် အကြောင်း ၊ အကျိုး ဆင်ခြင် နိုင်စွမ်း တနည်း အားဖြင့် သိနိုင်စွမ်းကို ပညာဟု ခေါ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ထိုသို့ ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိသူတို့ကို ပညာတတ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြထားပါသည်။
ထို့ ကြောင့် I2wan ပြောပြသော ပညာ၏ သဘောတရားနှင့်ဆရာဦးအောင်သင်းရှင်းပြသော ပညာ၏ သဘောတရားတို့ မှာ အတူ တူပင်ဖြစ်၍ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် အတော် အံ့သြခဲ့မိပါသည်။ ယခု အချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများမှာ အကျိုးအကြောင်း ဆင်ခြင် နိုင်စွမ်းမရှိ၊ လောဘကြီးဆဲ၊ ဝန်တိုမြဲ ငါမရလျင် အခြားသူများလည်း မရစေရဟူသော စိတ်ဓါတ်တို့ကာ တခြားနေရာတွင် လိုက်ရှာ နေစရာမလိုပါ ကျွန်တော်တ်ု့ လူ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ပင်မပြည့် သော MSC တွင် ထင်းထင်း ကြီး တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် MSC မှ ပြသနာများကို ဖြေရှင်း နေရတိုင်း I2wan ကိုသာ ပို၍ လေးစားမိသလို သာ၍ လည်း သတိရနေမိပါသည်။
myanmar life moral education
it's really scary how the people are turning into. I also can't understand the generous mindset of our people ( they can spend the money and donate etc ) but the first thing when friends meet is gossip or talk bad about others. It's not just onacertain types of ppl (it's across young, men, women, elderly) .. I think we are used to it..I think I sawapost of new steemit myanmar complaining no ppl vote him or support him, probably he didn't realize himself the one thing that should do is make more effort without blaming other people. I mean he wrote on my long post that I spend hours creating is good post.
kachinhenry (65) ·9months ago
I really want you to have conversation with I2wan.
hmm.. I2wan is slightly out of reach.. I guess I should haveaconversation with you first!
phyowaiaung (56) ·9months ago
စိတ်ဓာတ်တွေ ကို အရင် ပြင်မှ ရမယ် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့ ကို မျှော်လင့်မိပါတယ်။ လူနည်းနည်းလေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန် တဲ့ လူတွေ စုမိသွားရင် steempower များလာတဲ့ အချိန် ကျရင် ပြန်လက်တွဲ ခေါ်ယူချင်ပါတယ် ။အင်းတကော် က လူတစုလို ခံယူချက် မျိုးကို MSC ကလူတွေ ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။
အစ်ကိုလည်း အဲဒီလို အများကြီး စဉ်စားနေပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ အတွက် အချိန် အများကြီး မရှိတော့ဘူး
gelatofresco (57) ·9months ago
အများကြီးဗဟုသုတအမြင်ရရှိပါတယ် အကို ရေးသားတင်ပြချက်က ထိမိပီး လိုအပ်ချက်ကိုသေချာထောက်ပြနိုင်တဲ့ အကို့ရေးသားတင်ဆက်မှု့ကို အရမ်းလေးစားတယ် အခုဆို အကိုဟာ ကျနော့်၏ နာမည်အကြော်ကြားဆုံးဖြစ်နေပါပီ အလုပ်ကပြန်လာ အကိုရေးတဲ့ပို့စ့်အသစ်ရှိလား ၀င်ဝင်ကြည့်ရတယ် brand တစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်ချိန်မှာ အရမ်းခက်ခဲပေမယ့် နာမည်ရလာတဲ့ brand ကတော့ ဘယ်လောက်ဈေးကြီးပါစေ မ၀ယ်နိုင်ရင် ငေးမယ် ၀ယ်နိုင်ရင် စိတ်ချမ်းသာစွာ ပျော်ရွှင်မယ် အကိုက ကျနော့် brand ဖြစ်နေပီ ဒါနဲ့ တောင်းဆိုမှု့လေးတခု ပြုခဲ့ပါရစေ အကိုဟင် Trade ပညာရပ်နဲ့ပါတ်သတ်တာလေးများဝေမျှပါအု၃်းလို့ အစဉ်အမြဲလေးစားလျှက်ပါ ခင်ဗျ
ကျွန်​​တော်​တို့မြန်​မာ​တွေ တိုးတက်​ချင်​တယ်​ ​ပြောင်းလဲချင်​ကြတယ်​ သူများနိုင်​ငံ​တွေလို​နေချင်​ကြတယ်​....
ဒါ​ပေမဲ့ စိတ်​ဓာတ်​ကျ မပြင်​ကြဘူး။ ကိုယ်​ က အကျိုးရှိလို့ steemit မှာ စာ​ရေးဖို့​ခေါ်တာ​တောင်​ င​ပေါကြီးလို့ ​ပြောခံရ​သေးတယ်​ဗျာ
အဲဒီလူတွေကပဲ ... သူတို့ Steemit Platform ပေါ်ရောက်လာရင် မြန်မာတွေက တွဲ မခေါ်တတ်ဘူး၊ အမြင်မကျယ်ဘူး ဒါကြောင့် မြန်မာပြည် မတိုးတက်တာလို့ ပြန်ပြောပါလိမ့်မယ်
နိုင်ငံရဲ့ အသက် အခြေခံ ပညာရေးကို အနှစ်(50)လောက် တခြားနိုင်ငံတွေထက် နိမ့်ကျအောင်လုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူငယ်တွေရဲ့ အခြေခံ စိတ်ဓါတ်များဟာ ယနေ့ခေတ် မှာ နိမ့်ကျချင်တိုင်းနိမ့်ကျနေတာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကမ္ဘာကို ရင်ဘောင်တန်း ပီး တနိုင်ငံလုံး လိုက်နိုင်ဘို့ တော်လေး အချိန်ပေးရအုန်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ။
ဒါကြောင့်ပါ ကိုရွှေဘိုရေ... MSC နဲ့ နည်းနည်းချင်း ကြယ်ငါး ကောက်နေကြတာပါ။
ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ တွေးလေ တွေးလေ အဖြေမထွက်လေဖြစ်နေတယ် ကိုဟင်ရေ ပြသနာ တိုင်းဟာ အဖြေရှိကြတယ် ဆိုပေသော်ငြား အရိုးစွဲနေတဲ့ မြန်မာတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ က ဘယ်ကစရမှန်းကို မသိတော့တာပါ ဒီနေ့ copy မလုပ်သင့်ကြောင်း ပိုစ့်ရေးတင်တယ်
ခနနေတော့ စာအုပ်ထဲက အတိုင်း ကူးချထားတဲ့copy သမားထုတ်ခံရတယ် သိသိကြီးနဲ့ကို မပြောင်းလဲချင်တဲ့ လူတွေက အများသားဗျာ
အရှင်ဘုရား အခုလို နားလည်ပေးတာကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား။ အခု လက်ရှိပြသနာမယ် တပြည့်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတာ ဘုရားဟောတရားတော်များကို copy ကူယူပြီး တင် နေကြသူများကို တပြည့်တော်တို့ admin များကလည်း ဘယ်လို တားဆီး ရမှန်း မသိပါဘုရား။
အစ်ကိုတို့တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာမှာ မျက်နှာအငယ်ခံပြီး အကူညီတောင်းခံခဲ့ရတာတွေ အချိန်ကုန်ခံပြီး ခေါင်းရှုပ်ခံ လူမုန်းခံ ရှေ့ကနေပြီး လမ်းပြပေးပေမယ့် တစ်ချို့တွေက လမ်းမှန်မမြင်နိုင်ကြတာ အင်မတန်မှ ဝမ်းနည်းစရာပါ စည်းကမ်းကိုပိုပြီး တင်းကျပ်တာ ကောင်းပါတယ် ဘာလို့ဆိုတေ့ာ မြန်မာတွေက ခေါက်ရိုးကျိုးနေပြီ ခါးလောက်မှန်းမှ ဒူးလောက်ကျတာပါ ကျနော်လည်း နောက်ပိုင်းရသမျှကို spစုပါတေ့ာမယ်ခင်ဗျာ
သင်ကြားရေးအတွက်အလွန်ကောင်းသော post တစ်စောင်ပါ။
မှန်ပါတယ်အစ်ကို လူတော်တော်များက လောဘနှင့်အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်လာကြတဲ့အတွက် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုတွေဟာလည်း တစ်နေ့တစ်နေ့များလာနေပါပြီ MSC မှာလဲ ဒိအတိုင်းပါဘဲ တချို့က ကိုယ့်အတ္တရှေ့တန်းတင်ပြီး Pro လောက်သာယူချင်ကြတာပါ အပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိတော့ စည်းကမ်းတွေကတော့ ပြောင်းလဲနေရမှာပါဘဲအစ်ကိုရေ
စည်းကမ်းပြောင်းလည်း ခြင်းအတွက် တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေသိ အများကောင်းဖို့ အတွက် မလိုက်ပါနိုင်သူ အချို့ကတော့ ကျန်နေရစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါအကို ခုလိုအတွေကြုံလေးတွေက လေးစားအတုယူမိလိုက်ပါတယ်ခမျ…
paingphyothu (42) ·9months ago
နိုင်ငံခြင်း အသိပညာခြင်း စည်းကမ်းခြင်း ယှဉ်ပြောလာကြရင်လည်း နှုတ်ဆိတ်နေရတာကများပါတယ်။
အရိုးစွဲနေတဲ့ အတွေးအခေါ် အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြင်ဖို့က တေ်ာတော်ကိုလုပ်ယူရပါဦးမယ်။
ahtaroo (58) ·9months ago
တစ်​ဦးတစ်​​ယောက်​ချင်းပြင်​သွားနိုင်​ရင်​ အ​ကောင်းဆုံးပါပဲ။ မြန်​မာနိုင်​ငံက လူ​တွေက ကိုယ်​အတ္တပဲ ​ရှေ့တန်းတင်​ကြတာ။
mamamyanmar (58) ·9months ago
That right ပါ
domelay (60) ·9months ago
ခက်တယ် ဘယ်လိုထိမ်းရမန်းကို သိဘူးရယ် သိလျှက်နဲ့မိုက်တွေကိုး အကိုပြောဖူးသလို ခလေးတွေ အကုန်ကနေ စပြောင်းမှ အဆင်ပြေမယ်
donjaun (60) ·9months ago
သိရလေ သိရလေ လေးစားလေပဲ
ပြင်သင့်တာတွေ ဖြည့်သင့်တာတွေ သိရ မှတ်ရပါတယ်။
ဆက်လက်စောင့် မျှော်နေပါတယ် အကို ....
juliebawk (53) ·9months ago
ansoe (62) ·9months ago
အမြင်မှန်ကြလို့ အမှန်မြင်ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေပါတယ်
pyaesone101 (52) ·9months ago
မင်္ဂလာပါ အကိုရေ msc မန်ဘာဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် Msc ၏ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာပါ့မယ် စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာဖို့ အသင့်ပါ
အားလုံးက ရေတွင်းထဲက ဖားတွေ ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာပါတယ် မိရိုးဖလာဆိုတဲ့စကားကလည်း အတော်တာသွားပါတယ် အတုမြင် အတတ်သင်နဲ့ စိတ်ဓာတ်မှားတွေ လက်ဆင့်ကမ်းလာကြတာပါ အရှုံးထဲက အမြတ်ဆိုသလို နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်နိုင်တဲ့ လူအနည်းငယ်ရှိတာပဲ ကံကောင်းနေပါပြီ အစ်ကိုဟင် ယုံကြည်ချက်နဲ့ ရှေ့ဆက်နေရင် အားလုံးမဟုတ်တောင် တစ်ဝက်တော့ ခရီးရောက်မှာပါ
အခုလို နားလည်ပေးတာ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်
များများရေးပေးပါအကို၊ မသိတာတွေအကိုရေးမှ အများကြီးသိရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီး ရေးနေပါတယ်
htinyarsai (46) ·9months ago
SP စုမယ် အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်ထိ တွဲခေါ်ပေးကြတဲ့ senior များကျေးဇူးအထူးပါဗျာ
Sp စုမယ်လို့ သိရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါသည်။
minsoenaing (59) ·9months ago
ပညာရေးလည်းဟုတ်တယ် ပြီးတော့လေ လေးစားအတုယူစရာလူတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ကြတာလည်း ရှိတယ်၊ တရုတ်ပြည်မှာ နိုင်ငံတကာက လေးစားဖွယ်လူတွေကို ကျောက်ရုပ်တုလုပ်ပြီး ပြထားတာမျိုးက မြန်မာပြည်မှာမရှိလောက်ပဲ ၊ဥပမာလဂွန်းအိမ်တို့လို နှလုံရည်မြင့်တဲ့လူတွေကို အရင်ကသင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ၊နောက်ပိုင်းမတွေ့တော့ဘူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်ရုပ်တောင်မတတ်သာလို့ကျန်နေခဲ့တာဆိုတော့လေ၊ ဘာပဲပြောပြောပညာရေးနိမ့်ကျတာကလည်းများပါတယ်
အဲဒီတော့ .. ကျွန်တော်တို့ နည်းနည်းများ ပြန်မြင့်နိုင်မလားလို့ ကြိုးစားနေရတာပါ ဆရာ
ငွေလိုချင်လို့ Post ရေးတာထက်
Post ရေးချင်လို့ကိုရေးတာမျိုး ဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆုံးမနေ ရပါတယ်။ ရေးလိုက်တဲ့ Post မှာ reward လေးများ
နည်းနေရင် နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းချင်ဘူး ။
အဲဒါနဲ့ Boost လုပ်ပစ်လိုက်ရော :D ။ တကယ်တမ်း
ကျတော့ Boost တာ ရှုံးတာများပါတယ် Bro။
မှန်ပါတယ်... အဲဒီလို reward တွေအတွက် စိတ်မပူ ရအောင် MSC ကကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတာပါ။ အခု လူ ၂၀၀ သာသာပေါ့။ လူသိန်းချီ ပါဝင်တဲ့ Community တခုမှာ ဆောင်းပါးအရေးအသားကောင်းသူ vote 1000 ရလျင်ပင် လုံလောက်တဲ့ အနေအထားပါ
billionairehein (60) ·9months ago
စည်းကမ်းသည် အစပထမပိုင်းတွင် တင်းကျပ်ခက်ခဲသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ဆက်လက်စောင့်ထိန်းသွားပါက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဖြစ်သွားကာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိပေမည်။ MSCထပ်မံစည်းကမ်းထုတ်၍ တိုးတတ်အောင် လုပ်သင့်ပါသည်။ SP စုဖို့ လိုက်နာပါမည်။ ရှေ့ဆောင်သူတို့ ကောင်းစေချင်၍ ဆောင်ရွက်ခြင့းကို လိုက်နာပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အခုလို နားလည် ပေးသည့် အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
thatkozaw (57) ·9months ago
စိတ်​ဓာတ်​​တွေမ​ပြောင်းနိုင်​သ၍ စည်းကမ်း​တေ ထပ်​ထွက်​လာမှာပဲ
အခြေအနေကတော့ ကြယ်ငါး ကောက်ရတာ ... လက်ပန်းကျ လာသလို ရှိနေပြီ
fullmi (49) ·9months ago
For some time the cost of the SBD has dropped considerably. Receives only 1.50SP at 10$ price
khayae (51) ·9months ago
စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်တယ်ဗျား စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်
saipanpha (50) ·9months ago
အခုလက်ရှိရသမျှကိုအကုန်ဆုနေပါတယ်ဘဒို သုံးလမထုတ်ပဲဆုမယ်လို့ plan ဆွဲထားပါတယ်
myintlwinsoe (60) ·9months ago
ကျွန်တော်တို့ Inntagaw အဖွဲ့လေးကို အသိမှတ်ပြုပေးလို့ ဝမ်းသာရပါတယ်အကို။ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားပါမယ် အကို။
ework (22) ·9months ago
Please upvote follow me@ework
zinminnaing (42) ·9months ago
မှန်တယ် အစ်ကိုရေ အဲ့လို များများရေးပေးပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါအကို အဲ့လိုစိတ်မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတာတင်မကပါဘူးမိသားစုဝင်တွေထဲမှာလဲအဲ့လိုလူတွေရှိပါတယ်။စိတ်ညစ်ရပါတယ်။
htwegyi (56) ·9months ago
ဖတ်​လုိ့​ကောင်းပ ကိုဟင်​ ​မျှော်​​နေပါမည်​
yeyintkyaw (52) ·9months ago
ရသမျှကို power IP ဖို့လုပ်ပါ့မယ်ဗျ အခုချိန်ကနေစပြီးတော့
အမှန်​​တွေပါပဲ အကို၊ pro မတင်​နိုင်​​သေး​ပေမယ်​၊ ကြိုးစား​နေပါတယ်​ ။
What it is l2wan my friend.
wooooooow အရမ်းမိုက်တဲ့ post ပါဘဲ ဖတ် ရင်းပိုစိတ်ဝင်စားလာလေလေ ပါဘဲ မြန်မာ တေစိတိဓါတ်ပြောပြရာမှာ အရမ်း သဘောကျမိပါတယ် ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုပြင်ကြရဦးမယ် လူများစု ကျွန်တော်လဲပါနေနိုင်ပါတယ် အခက်ခဲရှိနေချိနိဆို မပြောတတ်ပါဘူး ကျွန်တော် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပြန်ပေးချင်မှ ပေးမိလိမ့်မယ် ဒါဟာ ပညာရေး ညံဖျင်းခဲ့လို့ဆိုတာလဲ လက်ခံမိပါတယ် ကျွန်တော် ဟာ7တန်းနဲ့ကျောင်းပီးသူပါ စာပေကို ဖတ်တာလောက်သာဝါသနာပါပီး မပြည့်ဝ မကျင့်သုံးနိုင်သေးသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ် ရေးဖို့တောင် အခက်တွေ့နေဆဲပါ ကြိုးစားပါဦးမယ် ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
What are you doing here bro but you are looking for incredible
rocketgyi (49) ·9months ago
ronaldjosema (38) ·9months ago
Excelente su post amigo saludos desde venezuela
naw (46) ·9months ago
patrickshar (52) ·9months ago
Newbie တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဗဟုသုတ အများကြီးရပါတယ် .. SP အရင်စုပါမယ်
Please upvote adn follow me@ework
zinzin (51) ·9months ago
power ပဲစုပါမယ် ကိုဟင်ရေ။